Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » News » Ọ dịghị dike hapụrụ na ụbọchị njem nlegharị anya nke ụwa a 2021
Inweta njem nleta • Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Akụkọ mkpakọrịta • Awards • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Education • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • Akụkọ Ahụike • ICTP • Ajụjụ Ọnụ • News • ndị mmadụ • Mgbasa Ozi • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Sustainability News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • WTN
Network Tourism Network dị naanị ọnwa iri na asatọ, mana ndị ndu ọhụrụ na -apụta na njem njem na njem njem ụwa.
Ndị World Tourism Network kọwara ọtụtụ n'ime ha dị ka ndị dike njem nlegharị anya - mana ole ndị ka ha bụ?
The Network Njem Nleta Ụwa (WTN) nwere ndị otu na mba 128 wee pụta na iwughari. njem nkwurịta okwu.
Dabere na UNWTO, ụbọchị njem nlegharị anya nke ụwa a 2021 bụ maka itinye aka na njem. WTN na -ekwe nkwa na nke a gụnyere ndị dike niile na -enweghị aha.
Ezigbo ndị dike bụ ndị na -enweghị azụmahịa n'oge ọrịa na -efe efe ma ka kwenyere na njem na njem njem. E nyere ndị otu a na -amaghị ama ihe nrite ahụ Onyinye dike njem nlegharị anya nke Anonomyous. site na World Tourism Network taa.
”Ezigbo ndị dike n'obi m na -enweghị ọrụ ruo ọnwa 18 wee lanarị.
Agbanyeghị na ha anaghị ahụ anya - ha nọ n'etiti anyị, mana ha nwere ike ha agaghị enwe olu. Achọrọ m ka ha gee anyị ntị, bịa n'ihu, ka anyị nwee ike too ha maka ịlanarị ma gaa n'ihu na -adị ndụ, ma bụrụ akụkụ nke nnukwu ụlọ ọrụ anyị. Ụbọchị njem nlegharị anya nke ụwa 2021 bụ ihe na -etinyeghị ọnụ, a ga -etinyekwa otu a. ” Marikar Donato, onye na -ahazi ihe omume World Tourism Day maka WTN na onye nlegharị anya n'onwe ya.
Ọ gbakwụnyere, "E nwere puku kwuru puku ndị dike njem nleta amaghị."
Onye guzobere na onye isi oche nke World Tourism Network kwukwara, sị: Enwere m oke nganga na Marikar ị nweta nturu ugo Anonomyous Tourism Hero, nke mbụ n'ụwa a.
Ọ dị ngwa, anyị ghọtara ndị dike a amaghị. Ther dị ebe niile.
Mgbe ụfọdụ anyị na -ama ndị dike a bụ. Anyị nwere ọnọdụ ndị mmadụ achọghị ka akpọpụta ha dịka ndị dike. Ha chere na ihe ha na -ekwesịghị ịkọrọ ndị mmadụ.
Obi dị m ụtọ ikwusa, Network Njem Nleta Ụwa bụ ọgbakọ nlegharị anya mba ụwa mbụ na -achọpụta mkpa ọ dị itinye ndị dike a amaghị ama.
The Onyinye dike njem nlegharị anya ka etinyere ya na dike.na njem Pọtụfoliyo.
Onye nchoputa WTN Dr. Peter Tarlow kwetara wee sị:
“Njem nlegharị anya bụ ọtụtụ puku ndị ji achọghị ọdịmma onwe onye na -emepụta njikọ n'etiti ndị mmadụ, ọdịbendị na mba dị iche iche.
Kpakpando ndị a na -eme njem nlegharị anya bụ ndị dike ụlọ ọrụ na -akpọghị aha na -eweta ìhè n'ime ụwa nke gbara ọchịchịrị.
Network Tourism Network na -achọ ime ka ndị dike njem a pụta ìhè. Dị ka Dr. Peter Tarlow, onye njikọ nke World Tourism Network kwuru, sị: “Njem nlegharị anya abụghị naanị ụlọ ọrụ, ọ bụ ngwakọta nke pragmatic na nke mmụọ, mmekọrịta nke mkpụrụ obi na eziokwu ụwa a.
Ndị dike njem nlegharị anya bụ ndị na -ejikọ ụkpụrụ omume na ihe bara uru ma na -agwakọta mmadụ anyị na ụwa nke njem ”Tarlow na -echetara anyị na ndị dike njem na -anọchite anya ihe kacha mma n'ime anyị niile na ịmụ gbasara onye ọ bụla bụ njem n'ime omimi nke okike na nlekọta. ”
Marikar Donato bụ onye ndu nlegharị anya Washington DC na onye isi na ụwa Oftù Na -ahụ Maka Njem Nleta Ndị njem (WFTGA)
Taa, World Tourism Network na -emekwa ememme ndị ama ama ya. Dike ọ bụla WTN matara emeela ihe karịrị ihe a ga-atụ anya na ọ ga-agafe ọrịa COVID-19.
Dr. Taleb Rifai, onye bụbu onye odeakwụkwọ UNWTO ugboro abụọ nabatara ndị dike si n'ụlọ ya na Jọdan. Dike njem nleta Mary Rhodes, Onye isi oche nke Guam Hotel & Restaurant Association bilitere n'elekere anọ nke ụtụtụ iji soro ndị dike nọ na kọntinent ọ bụla bịa mmemme mbugharị ụwa a.
Dr. Walter Mzembi, onye bụbu minista njem nlegharị anya na Zimbabwe dọrọ aka na ntị na ụwa a emechiela, yana otu akụkụ na -ebibi ndị ndu njem nlegharị anya nke ọtụtụ afọ lụrụ ọgụ maka afọ 20.
Alain St. Ånge, onyeisi oche nke Ndị njem nlegharị anya nke Africa, na onye minista njem nlegharị anya si Seychelles nwere ozi nke ịdị n'otu maka Afrịka.
Aleksandra Gardasevic Slavuljica onye isi njem nlegharị anya maka mba Balkan a so na WTN site na mbido. E mere ya dike njem maka ọrụ ya n'ịchịkọta mpaghara Balkan ọnụ. Ọ kwadoro ya Klodiana Gorica, onye njem nlegharị anya, onye nkuzi zuru oke na Mahadum Tirana, ngalaba akụnụba, na Albania.
Nuru site na Dọkịta Snežana Štetić nwere anọwo na-arụ ọrụ na Njem Nleta na mmụta maka Njem Nleta ihe karịrị afọ iri anọ ma bụrụkwa onye isi otu mmasị mmụta, gbakwunyere na-eduga otu Balkan dị elu nke Network Tourism Network.
Deepak Joshm, dike njem nlegharị anya si Nepal, na onye bụbu onye isi oche nke Nepal Tourism Board nyere nzaghachi ya na ịmalitegharị njem maka mpaghara Himalayan.
Prọfesọ Geoffrey Lipman nke SunX na Mmekọrịta ihu igwe na njem mba ụwa (ICTP) chetaara ụwa ihe egwu nke mgbanwe ihu igwe.
Dike njem Mouhamed Faouzou DEME si Senegal kesara ozi njem olile anya, ntụkwasị obi na agbamume ya. Ọ bụkwa onye nnọchianya nke ndị njem nlegharị anya nke Afrịka, yana onye ndụmọdụ nka nke minista njem na njem ụgbọ elu nke Senegal.
Hero Tourism na CEO nke Group ọzọ LLC na Azerbaijan, Efsun Ahmadov, Baku, na Azerbaijan nwere ahụ ọfụma ka ikpe gbasara COVID gasịrị.
Dike njem Diana McIntyre-Pike nyere mmelite mmekọrịta ọhụrụ ya na dike njem nlegharị anya Edmund Bartlett, onye minista njem na Jamaica. Diana bụ dike njem na onye ndu njem nlegharị anya obodo na Jamaica.
Amaka Amatokwu-Ndekwu, Lagos, Nigeria bụ onye rụpụtara otu ọhụrụ ụmụnwaanyị Afrịka na njem nlegharị anya na ile ọbịa na Naịjirịa. Ọ bi na United States na Nigeria.
Onye dike njem nlegharị anya Joseph Kafunda bụ onye isi oche nke Associationlọ Ọrụ Na -ahụ Maka Njem Nleta Ọhụrụ na onye otu World Tourism Network nke dị na Namibia. O si na Botswana sonyere.
Dọkịnta Peter Tarlow, onye na-arụkọ ọrụ na World Tourism Network mechiri ememme ahụ site n'ekpere nwere ọtụtụ okwukwe.
Enweghị ụgwọ ọ bụla ịhọpụta ma ọ bụ nweta nnabata ndị dike site na World Tourism Network. Ọ na -ewe opekata mpe nhọpụta abụọ ka echebara echiche maka onyinye a. Ozi ndị ọzọ na www.egburu.nez